Kanzuru iri kuda kuti vanotengesera mukati meguta vabviswe
Mutongi wedare repamusoro, Justice David Mangota, vaudza kanzuru yeguta reHarare pamwe nemapurisa eZimbabwe Republic Police, ZRP, kuti vasabvise vanhu vari kutengesera zvinhu mukati meguta reHarare kusvika nyaya yakakwidzwa kudare iri nesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation, VISET, yanzwikwa.
Advocate Bhatasara vanoti dare rapa mutongo uyu rakamirira mamwe mapepa anzi anofanirwa kuti asvitswe kudare iri.
"Zvazvinoreva ndezvekuti iye zvino izvi hapana munhu anofanirwa kuti abviswe. Zvinoreva kuti dare rinenge ratarisawo richiona ma rights evanhu richi compare nezvinonzi zviri kuda kuti zvi achivhiwe," Advocate Bhatasara vanodaro.
Sangano reVISET rakakwira kudare repamusoro iri zvichitevera danho rakanga ratorwa nekanzuru rekupa vanotengesera mumigwagwa mazuva maviri ekuti vabude mukati meguta senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere che typhoid, icho chakabata mimwe misha yeguta iri.
Asi vanotengesa zvinhu ava, zvikuru zvekudya zvakaita semichero, vari kuramba kuti vane chekuita nekupararira kwezvirwere vachipomera mhosva kuhurumende kuti ndiyo iri kukundikana kufambisa mabasa.
Hurukuro naAdvocate Tonderai Bhatasara